लुकाउदालुकाउदै पनि यसरी बाहिरै दिखियो नायिका निता र ज्योतिष हरिहरको गहिरो प्रेम…. – SUDUR MEDIA
April 26, 2021 AdminLeaveaComment on लुकाउदालुकाउदै पनि यसरी बाहिरै दिखियो नायिका निता र ज्योतिष हरिहरको गहिरो प्रेम….
फिल्ममा सबैभन्दा बढी हुने भनेको कलाकारको प्रेम र स,म्बन्धका बारेमा हो । कलाकारको ब्यक्तिगत जिवनका बारेमा सर्वसाधारणलाई धेरै चासो हुन्छ । त्यसैले पनि यस्तो कुरा धेरै चर्चीत हुन्छन् । अनेक अड्कलवाजी गरिएका कुरा नै सत्य हुने गर्दछ । नायीका निता ढुंगाना र ज्योतिष हरिहर अधिकारीको प्रेमको फेरी चर्चा हुन थालेको छ ।
नायीका नीता भारतमा छंदा हरिहर पनि भारत नै पुगेका थिए । उनले त्यो कुरा स्वीकार पनि गरेका छन् । उनले नीतासंग आफ्नो निकै राम्रो सम्बन्ध रहेको बताएका छन् । उनले भोली के हुन्छ भन्ने नसकिए पनि अहिले नीता आफुसंग निकै नजिक रहेको बताएका छन् ।उनले आफ्नो विवाहको बारेमा अहिले भन्न नसक्ने बताएका छन् ।
उनले विवाहको बारेमा आफ्नो अभिभावकलाई सोध्नुपर्ने बताएका छन् । उनले बुवा आमाको अनुमति विना विवाह नगर्ने बताएका छन् । उनले आफ्नो वारेमा केही नभने पनि बुवा आमाले सबै कुरा थाहा नपाएको बताएका छन् । उनले भारतमा निता ढुंगानासंग संगै रहेको स्वीकार गरेका छन् । उनले नितासंग प्रेम पनि स्वीकार गरेका छन् ।
भारतमा संगै रहेको बताएका उनले प्रेम पनि स्वीकार गरेका छन् । उनले साथी भनेर फिल्मको काममा रहेकी नितालाई भेट्न गएको बताएको भएपनि नितासंग समय विताएको स्वीकार गरेका छन् । प्रेमको चर्चालाई प्रमाणीत गर्नेगरी होलीमा नीता र हरिहरले होली एकै साथ मनाएका छन् लुकाउँदा लुकाउँदै पनि उनीहरुको प्रेम देखिएको थियो ।
हरिहरको संगत लागेर नीता धार्मीक भएको कुरा पनि नीताले स्वीकार गरेकी छन् । नीताले हरिहरको सुझाव अनुसार आफु शाकाहारी भएको र योग अभ्यास पनि गर्ने गरेको बताएकी छन् । नीताले अब वैशाखमा केही नयाँ कुरा आउने बताएकी छन् । तर त्यो के हो भन्ने कुरा भने खुलाइनन् ।
‘भ्वाईस अफ नेपाल’मा जान छुटेकी रचनाको सबैलाई चकित पार्ने आवाज, आवाज भनेको यस्तो हुनुपर्छ ! हेर्नुहोस (भिडियो सहित)